Guddiga Xuduudaha Soomaaliya oo xaqiijiyay in Kenya gudaha Soomaaliya u soo gashay dhul ballaaran. – Kalfadhi
Guddoomiye ku xigeenka Guddiga madaxbanaan ee Xuduudaha Soomaaliya Xuseen Nuur Xaashi ayaa maanta warbixin siiyay Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya kadib markii ay Guddiga hortagayn Guddigaasi.
Xuseen Nuur Xaashi ayaa Golaha Shacabka warbixin ka siiyay waxyaabihii u qabsoomay 4tii bil ee la soo dhaafay iyo Caqabadaha ku horgudban islamarkaana caqabad ku noqon kara qorshaha afarta bil ee soo aadan.
Guddiga Xuduudaha waxay sheegayn in heshiisyo ku saabsan Soodimaha Maamul Gobaleedyad ay la galeen Madaxda Maamul Gobaleedyada iyo mas’uuliyiin kale maadaama dhowaan ay bilaaban doonto sameenta Soodimaha Maamul Gobaleedyada dalka.
Sidoo kale waxay ka hadleen Arimaha Xuduudaha Soomaaliya iyo Kenya iyagoo cadeeyay in Kenya ay dhul ballaaran gudaha Soomaaliya u soo gashay arintaasna loo baahanyahay in si deg deg ah wax looga qabto.
Xuseen Nuur Xaashi Guddoomiye ku xigeenka Guddiga Madaxabanaan ee Xuduudaha ayaa sheegay in Kenya ay ku darsatay dhul gaaraya 476 KM waxayna arinatasi ku tilmaamayn dhul boob sababi kara dagaal iyo dhiig dadweyne.
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo su’aalo waydiiyay Guddigaan ayaa Xukuumadda ka dalbaday in ay si deg deg ah war uga keenaan Arimaha ku aadan Xuduuda Soomaaliya iyo Kenya. Dhinaca kale Guddiga ayaa sheegay in ay diyaariyeen Sharciyadii dib u habeen loogu sameyn lahaa dhismaha Maamul Gobaleedyada dalka ka jira oo markii hore deg deg lagu dhisay.